Distance Learning - Soomaali / Home
Waa maxay barashada masaafada (barashada internetka)
Hadafka laga leeyahay barashada masaafada waa in la sii wado barashada ardayga iyo kobaca inta ardayda ay ka maqnaanayaan iskuulka. Waxaad filan kartaa isbeddelada qaarkood SIDII aan u gaarsiin lahayn tilmaamaha laakiin waad ogtahay waxa ku jira iyo adkaanta waxbarida inay noqon doonaan isku mid. Ardaydu waxay u adeegsan doonaan madal dijital ah inay ka helaan ogeysiisyada iyo meeleynta macallimiinta. Ardaydu waxay ka qaybqaadan doonaan nashaadaadyo kala duwan, laakiin maahan dhamaan qadka online tooska ah.
Waad ku mahadsan tahay taageeradaada sida aan u sameyno isbadalkan. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, fadlan la xiriir macallinka cunuggaaga ama wac Khadka Waalidka.
sida casharrada loo siin doono ardayga
Barashada onlineka waxay ardayda oo dhan u bilaabmi doontaa Isniinta, Maarso 30-keeda oo bilaabmaysa 10: 00 a.m.
Ardayda iyo qoysasku waxay u adeegsan doonaan emailka iyo Google kulanka sidii aaladda internetka oo inta lagu gudajiro waxbarashada onlinka. Macallimiintu waxay e-mayl u diri doonaan wax-barashada cusub Isniinta kasta 10-ka subaxnimo waxaana loo heli doonaa taageero dheeri ah xagga emaylka, Google Kulan ama taleefanka usbuuca oo dhan.
dugsiga xannaanada iyo barbaarinta
Ardayda dugsiga hore waxay u isticmaali doonaan Seesaw, aalad internetka ah, inta lagu gudajiro barashada masaafada. Macallimiintu
waxay Isniin kasta dhajin doonaan casharo cusub illaa 10:00. Macallimiintu waxay sidoo kale bixin doonaan nashaadaadyo waxbarasho oo dheeri ah maalin kasta 10-ka subaxnimo waxaana loo heli doonaa taageero dheeri ah xagga emaylka, Google Kulan ama taleefanka usbuuca oo dhan. Waalidku waa inay maalin walba ka soo galaan aaladda guriga si ay u dhammaystiraan nashaadaadka ardaygooda.
Macallimiintu way duubayaan dhammaan tilmaamaha, si qoysaska ay u dhammaystiraan casharrada wakhti kasta oo maalinta ah. Ardayda waxaa looga baahan yahay inay galaan Isniinta kasta illaa Jimcaha oo ay dhammaystiraan meeleynta si ay u helaan credit imaanshaha. Macallimiintu way diyaar u noqon doonaan inay ka jawaabaan su'aalaha oo ay ku siiyaan caawimaad iyagoo adeegsanaya Seesaw ama taleefoonkooda degmada ama cinwaanka emaylka.
Ardayda dugsiga hoose waxay u adeegsan doonaan Seesaw inay helaan maadada fasalka. Macallimiintu way duubayaan dhammaan tilmaamaha, si qoysaska ay u dhammaystiraan casharrada wakhti kasta oo maalinta ah. Ardayda waxaa looga baahan yahay inay galaan online website sida schoology and seasaw Isniinta kasta illaa Jimcaha.
Qayb ka mid ah ilaha Seesaw ee qoysaska ayaa laga heli karaa halkan. (HERE)
Ardayda dugsiga hoose waxay lahaan doonaan inta u dhaxaysa hal iyo badh iyo laba saacadood iyo bar oo casharada maalin kasta taas oo ku xidhan heerka grade kooda.
Macallimiintu waxay bilaabi doonaan inay ardayda u bartaan Seesaw. Barashada tacliinta ayaa bilaaban doonta intaas kadib
Macallimiinta dugsiga sare waxay ku dhajin doonaan nashaadaadka, shaqooyinka, iyo qiimeynta Schoology maalin kasta 10-ka subaxnimo.
Macallimiinta waxaa laga heli karaa taleefan, emayl, iyo Schoology inta u dhaxaysa 10:00 subaxnimo - 3:00 pm Isniinta-Jimcaha.
Ardaydu waa inay galaan galaas walba oo loo yaqaan Schoology maalin kasta, oo shaqada oo dhanna waxaa loo gudbin doonaa Schoology.
Qoysasku waxay kormeeri karaan horumarka ardayga ee akadeemiyada iyada oo loo marayo Schoology iyo Skyward. Agabyada koorsooyinka iyo shaqooyinka waxaa lagu daawan karaa Schoology. Darajooyinka iyo shaqooyinka ka maqnaa waxaa laga daawan karaa Skyward.
macluumaadka ku saabsan cilmiga barashada ee schoology waxaa laga heli karaa https://www.isd742.org/Page/7507
Qof kasta oo u baahan caawimaad dheeri ah waa inuu la xiriiraa takhasuska warbaahinta dugsiga, maamulaha, ama la-taliyaha dugsiga (Counselors)
Waxbarashada loogu talagalay ardayda leh baahiyo gaar ah.
Ardayda hesha adeegyadda waxbarashadda khaaska ah waxay ku sii xirnaan doonaan fasalkooda iyo sidoo kale maamulaha kiiskooda iyo bixiyeyaasha waxbarashada gaarka ah. Maareeyayaasha kiisasku waxay la shaqeyn doonaan qoysaska si ay u habeeyaan tilmaamaha u gaarka ah arday kasta. Arday kasta oo leh IEP wuxuu yeelan doonaa Barnaamij Waxbarshada Maskax Ahaan Shakhsiyeed (IDLP) kaas oo ka hadlaya himilooyinka ardayga, adeegyadiisa, iyo laqabsashadiisa inta lagu jiro
barashada onlineka. Maamulayaasha kaysku waxay la shaqeyn doonaan macalimiinta iyo maamulka iskuulka cunugaaga si loo hirgaliyo IDLP ardayga.
Waqtiyada adeegga ardayga waa mid gaar ah waxaana lagu qeexi doonaa IDLP. Si kastaba ha noqotee, kiisaska badankood tirada daqiiqadaha adeegyada inta lagu jiro Barashada Fogaanta waxay ka yaraan doontaa daqiiqadaha adeegyada lagu bixiyo goobta dugsiga maalinta, iyadoo la ilaalinayo waqtiga qoondeynta dhammaan fasallada. Goorta barashada goobta ay dib u bilaabato, IEP-ga ardayga ee hore ayaa soo noqon doona.
Waalidka / mas'uuliyiinta leh su'aalaha ku saabsan IDLP ee ardayga waa inay ku xirnaadaan manigerka kayska.
Ardayda luqadaha badan ku hadla iyo ardayda baranaysa Ingiriisiga sidii luqad labaad.
Ardaydu waxay si dhow ula shaqeyn doonaan fasalkooda iyo macalimiinta barta Ingiriisiga inta lagu gudajiro barashada fog si ay usii wataan horumarka hormarka Luuqada Aqoonta ee kuhadalka, dhageysiga, aqrinta iyo qorista Ingiriisiga.
Caawinta ardayda dareenka shucuurta:
Waxaan ognahay in ay tahay xilli ku adag ardayda iyo qoysaska. La-taliyayaashayada dugsiga, shaqaalaha bulshada, kalkaaliyayaasha caafimaadka, kiimikada, iyo la-taliyayaasha MN Greater ayaa halkan kuu ah adiga. Kooxdaani waxay ku xirnaan doontaa ardayda iyadoo loo marayo Google Kulan sidoo kale waxaa lagu heli karaa taleefan ama emayl. Dugsiyadeenu waxay sii wadayaan inay bixiyaan fursado ku xirnaanshaha ardayda iyo qoysaska. Ogeysiisyada maalinlaha ah ama nashaadaadka kale ee dhismaha bulshada ayaa sii socon doona iyada oo loo marayo Seesaw oo loogu talagalay ardayda dugsiga hoose iyo Schoology ee ardayda dugsiga sare.
Dariiqooyinka ay qoysasku ku helaan caawimaad
Macallimiintu waxay ku dhejin doonaan nashaadaadka barashada Seesaw iyo Schoology 10:00 subaxnimo.
Macallimiintu waxay ku heli doonaan farriin cod ah, emayl ama Seesaw iyo Schoology fariin 10am-3:00pm
Khadadka Ingiriisiga, Soomaaliga iyo Isbaanishka ayaa loo heli karaa qoysaska u baahan waacimaad.
Caawinta waalidka iyo marin u helka laptops iyo ipads
Ardayda dugsiga hoose: Ma u baahan tahay in lagaa caawiyo isticmaalka Seesaw ama qalabka loo yaqaan 'chromebook' ama ipad?
Ardayda u baahan caawinaada teknolojiyada waa inay toos ugu weydiiyaan su'aalaha ku taqasusay warbaahinta Khaaska ah ee dugsigooda taleefanka ama emaylka si loogu caawiyo.
Ardayda dugsiga sare: Ma u baahan tahay in lagaa caawiyo kaalmada teknolojiyada?
Ardeydu waa inay ku toosiyaan su'aalaha takhasuskooda Media taleefan, fariin Schoology, ama emayl loogu talagalay in laga caawiyo.
Dhowr shirkadood oo internet ah ayaa hadda bixiya adeegyo internet oo bilaash ah oo ardayda loogu talagalay muddo 60 maalmood ah ama sannad dugsiyeedka oo dhan. Hoos waxaa ku yaal faahfaahinta laba bixiyeyaal oo u adeegaya aagga 742. Haddii aad u baahan tahay adeeg internet, la xiriir mid ka mid ah shirkadahaan sida ugu dhaqsaha badan. Fiiro gaar ah: Annagu uma oggolaanayno hal bixiye mid kale. Xusuusin: Soo-bandhigyada internetka ee 'Xfinity' uma adeegayso aaggeena.
Si aad u hesho caawimaad internet bilaash ah: wac 1-844-488-8395 ama iimayl: Timothy R. Pyle | Wakiilka Iibka Gudaha ee Gudaha, Email: Timothy.Pyle@charter.com
Caddee in ardaygaagu dhigto dugsiga degmada 742.
Ka codso khadka tooska ah barnaamijka Caawinta Waxbarashada Arvig ama wac 1-888.992.7844.
Ka dib markaad la xiriirto bixiye internetka, haddii aad wali su'aalo ka qabtid marin u helka internet-ka, fadlan iimayl u dir: ryan.cox@isd742.org ama wac 320.370.8125 oo farriin uga tag.